ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 3-Step ပြန်လည်နာလန်ထူမော်ဒယ်သုံးပြီးဖြတ် porn | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ Porn ဖြတ် အဆိုပါဆုကြေး Foundation ၏သုံးခြေလှမ်းပြန်လည်နာလန်ထူမော်ဒယ်
The Reward Foundation မှအဖွဲ့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပြproblemနာကိုအသုံးပြုခြင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်အဆင့်သုံးဆင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ရန်နှင့်စွဲလမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းများကိုကျော်လွှားရန်ရှေ့ပြေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Recovery သည်အဓိကအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုလပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်များအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့သောအလွန်အကျွံတွေးခေါ်မှုမှကုသခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာ ဦး နှောက်ထဲမှာရောဂါဗေဒသင်ယူမှုနှင့်စွဲအလုပ်လုပ်ပုံကိုသုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာ၌အကြံဥာဏ်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်ရှိအမည်မဖော်လိုသည့်အွန်လိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အကူအညီဖြင့်ကြိုးစားကြည့်နိုင်သည် nofap.com or rebootnation.org။ သင်သည်အဆင့် (၁၂) ဆင့်ပါသောစစ်မှန်သောဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်ဟုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကိုင်တွယ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောကုထုံးသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းပြနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည်။
များစွာသောကုထုံးဆရာများသည်ယခုအခါတွင်သာညစ်ညမ်းစေသည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြား porn-related ပြproblemsနာများအကြောင်းစတင်လေ့လာနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ yourbrainonporn.com။ ကုသသူအများစုသည် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အကျင့်ယိုယွင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခြင်းမရှိဘဲစိတ်ပညာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားရသည်။ သင်၏အလေ့အကျင့်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်နှင့်လှည့်ကွက်အသစ်များကိုပြန်ယူရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသင်၏ဘဝကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ပါ။ ယောက်ျားတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကို“ rebooting” လုပ်တယ်။ ၀ င်းဒိုးတွေများလွန်းရင်ဖွင့်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့ကွန်ပြူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သလိုပဲ။ ဤရွေ့ကား rebooting သို့မဟုတ် recovery ကိုအကောင့်အသစ်များ၏ ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်များက၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုပြသည်။
1 Step - porn သုံးပြီးရပ်တန့်
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာရှာဖွေနေရပ်တန့်နှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကူးယဉျကိုရပ်တန့်ရန်ရွေးချယ်သောအခါ Recovery ကိုသာတကယ်စတင်နိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားရန်လှုံ့ဆော်မှုရှိသည်ဖို့, အသုံးပြုသူတစ်ဦးကအလေးအနက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများအဖြစ်လူမှုရေးသူတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အလားအလာရှိကြောင်းကိုအသိအမှတ်မပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူကတောင်တစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစံချိန်ရတဲ့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ မြင် porn နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို.
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမှာကျနော်တို့ကထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဟုအဆိုပါဒဏ်ရာထဲကဖန်ခွက်ကိုယူ" ကိုအသုံးပြုပါ။ လူတိုင်းသည်ဒဏ်ရာဖန်၏အပိုင်းအစဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေဇာတိပကတိ၌နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်စတင်မရနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်များ၏ဖိအားကိုဖယ်ရှားဦးနှောက် reboot ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနှင့် arousal ၏သာမန်အဆင့်ဆင့်မှ resensitise နိုင်ပါတယ်။
၎င်းကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်စတင်ပါ။ သင်ဤတွင်ဖော်ပြထားသောစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် သုတေသနစာတမ်း။ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုလက်လှမ်းမီခြင်းအားဆန္ဒအလျောက်ကန့်သတ်ထားခြင်းနှင့်မလိုမုန်းထားသူများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၁ ရက်ပစ်မှတ်ထားပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အချက်ပြမှုကိုစတင်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်၎င်းတို့အားမည်သို့တုန့်ပြန်ရမည်ကိုပိုမိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ သင် porn ကိုမည်သည့်နေ့အချိန်၌အများဆုံးကြည့်နိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ 'ဘာလုပ်သလဲတိုက်တွန်းသည်ကြည့်ရတာကြည့်ရတာခံစားရတယ် ဤသည်မှာ ဦး နှောက်အတွင်းရှိစစ်မှုခံစားမှုပင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူတို့မရှိဘဲဖြစ်ခြင်း၏အဆင်မပြေကိုရှောင်ရှားရန်အပျော်အပါးအာရုံကြောဓာတုတစ်ခု hit ရဖို့အလိုရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုသက်သေပြလိုသည့်ဆန္ဒနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည်။ ၎င်းတိုက်တွန်းချက်သည် ဦး နှောက်ထဲရှိ dopamine နိမ့်ကျခြင်းသို့မဟုတ် opioids နည်းခြင်းသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ adrenaline-induced arousal သည်“ NOW A တစ်ခုခုလုပ်!” လုပ်ရန်ဖိအားပေးမှုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏အစကိုပြသည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့တှငျထိုအကွံဉာဏျမြားကိုကွိုတငျပွငျဆငျခွငျးမရှိ၊
ခဏတာခေတ္တရပ်တန့်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘရိတ်ကိုဖွင့်ပြီးသရုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီစဉ်းစားပါကလမ်းကြောင်းကိုအားနည်းသွားစေပြီးအကျင့်ကိုဖျောက်ပစ်လိုက်သည်။ ငါတို့မလိုချင်တဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာကအဲဒါကတန်ဖိုးရှိတယ်။ ၎င်းသည်ချုပ်တည်းမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောသော့ချက်ကျသောအသက်တာစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဉာဏ်ရည်နှင့်စွမ်းရည်ကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ အခြားသူများကသူတို့ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါမည်သို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပုံကိုလေ့လာပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နာကျင်မှုနှစ်ခုဖြစ်သောမိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းခြင်း၏နာကျင်မှု (သို့) နောင်တရခြင်းတို့ကိုရွေးချယ်ရန်လိုသည်။
ဒါဟာမဆိုလူတစ်ဦးဂိမ်းကစားခြင်း, လူမှုရေးမီဒီယာအဖြစ် porn အပေါ်ဘယ်လောက်မှီခိုစမ်းသပ်ခြင်းအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
ဒီမှာစာအုပ်ကနေတစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည် မရဏမိမိတို့ကိုယျကို Amusing: Show ကိုစီးပွားရေး၏ခေတ်ထဲမှာအများပိုင်သုတျ, N. စာပို့သမားများနှင့်အေစာပို့သမားသည်။ (နိဒါန်း) ။
ပါမောက္ခတစ် ဦး ကသူမက 'e-media မြန်' ဟုသူခေါ်သည့်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၄ နာရီလုံးလုံးကျောင်းသားတစ် ဦး စီသည်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။ သူကတာဝန်ကျတဲ့နေရာကိုကြေငြာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသောကျောင်းသားကကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့တွေးပြီးပခုံးချင်းခေါက်လိုက်တယ်။ ဆဲလ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ တီဗွီ၊ ကားရေဒီယိုစသည်ဖြင့်တစ်နေ့လုံးစွန့်လွှတ်ရမည့်အရာအားလုံးကိုသူတို့သိသောအခါ -“ သူတို့ညည်းတွားမြည်တမ်းကြတော့သည်။ ” သူတို့ကစာအုပ်တွေဖတ်နိုင်သေးတယ်။ သူမသည် ၂၄ နာရီမှလေးနာရီခန့်ကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မည်ဟုခက်ခဲသောနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူမကအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူတို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချိုးဖောက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းပြောရင်၊ ပြောမယ်၊ အီးမေးလ်နဲ့ချက်ချင်းစစ်ဆေးရင်ရမယ်၊ ပါမောက္ခက“ ငါပြန်လာတဲ့စာရွက်တွေကအံ့သြစရာပဲ။
“ သူတို့မှာ 'ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးနေ့' ဒါမှမဟုတ် 'ငါခံစားဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံ' ဆိုတဲ့ဘွဲ့တွေအမြဲရှိတယ်။ 'ငါသေတော့မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်' လို့သူတို့ရေးမယ်။ 'ငါတီဗီကိုလှည့်ဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့တကယ်လို့ငါသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်၊ ကျောင်းသားတစ် ဦး စီတွင် ၄ င်း၏အားနည်းချက်များရှိကြသည်။ အချို့အတွက်တီဗီ၊ ဆဲလ်ဖုန်း၊ အင်တာနက်သို့မဟုတ် PDA တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကရှောင်ကြဉ်တာကိုဘယ်တော့မှမုန်းကြဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းမြည်သံကိုကြားရတာနဲ့အဖြေမပေးဘဲဘယ်လောက်ပဲခက်နေပါစေ၊ သူတို့ဟာနှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာမလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အချိန်ယူကြတယ်။
သူတို့သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားလည်ဖို့လမ်းပေါ်ကဆင်းလာကြတယ်။ သူတို့ကတိုးချဲ့ပြောဆိုမှုများတိုးချဲ့ပါပြီ တစ်ယောက်က 'ငါတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်' လို့ရေးခဲ့တယ်။ အတွေ့အကြုံကသူတို့ကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ အချို့မှာအလွန်ဆိုးသောကြောင့်သူတို့၏တစ်လလျှင်တစ်ရက်အစာရှောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ အဲဒီသင်တန်းမှာပလေတိုနဲ့အရစ္စတိုတယ်ကနေဒီနေ့အထိ၊ ဂန္တ ၀ င်စာတန်းတွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးနှစ်အတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားဟောင်းတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သတဲ့။
ဤစာအုပ်၏စာရေးသူ၏သားသည်ယခုအခါ၎င်း၏နှစ်ဆယ် edition အတွက် says:
“ သူ့မေးခွန်းတွေကိုနည်းပညာနဲ့မီဒီယာတွေအတွက်မေးနိုင်တယ်။ ငါတို့နှင့်အရူးအမူးစွဲလမ်းလာသောအခါသူတို့ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ သူတို့ကငါတို့ကိုလွှတ်ပေးတာလား၊ ထောင်ချတာလား ဒီမိုကရေစီတိုးတက်အောင်လုပ်လား၊ သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပိုပြီးတာ ၀ န်ခံမှုရှိအောင်လုပ်နိုင်လား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များသည် ပို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသလား။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံသားတွေလား၊ အပေးအယူများသည်ထိုက်တန်သလော။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုမထိုက်တန်ပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လာမည့်အရာအသစ်ကိုလက်ခံခြင်းမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုမရပ်တန့်နိုင်သေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုး ၀ င်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာလား ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ” ငါတို့ကြည့်ပါ သတင်းပုံပြင် ကျွန်တော်တစ်ဦး 24 နာရီမျက်နှာပြင်အစာရှောင်ခြင်းအမှုကိုပြုသည့်အခါတစ်ဦး Edinburgh ကျောင်းတွင်ဆဌမပုံစံကျောင်းသားအုပ်စုတစုစီမံခန့်ခွဲပုံကိုအပေါ်။
porn ၏ compulsive အသုံးပြုမှု?
သင်သိသောသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်နေ့တည်းဖျက်သိမ်းခြင်းစမ်းသပ်မှုကိုကြိုးစားလိုပါကအကျိုးရှိသည်။ အကယ်၍ သင်အောင်မြင်ခဲ့လျှင်ဖျက်သိမ်းမှုကိုကြာရှည်စွာတိုးချဲ့ရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပြုအမူအား ၂၄ နာရီဖြတ်တောက်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာလွယ်ကူနိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်သုံးပတ်သည်အလေ့အထတစ်ခုမည်မျှတွန်းအားပေးသည်ကိုစစ်မှန်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ reboot လုနီးပါးဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ reboot အများဆုံးမကြာခဏအချို့ပိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတာဆိုတော့ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းပြန်သွားကြသည်သည့်အခါပထမဦးဆုံးနာရီ, ပထမဦးဆုံးနေ့နှင့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာညစ်ညမ်းပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြပါက porn-အခမဲ့နေထိုင်နေကြမတိုင်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာသွားသည်။ တစ်ဦးက reboot လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကမလှယျကူရှာတွေ့ပြုလျှင်ပဲကျေးဇူးတင်ရှိစေသတည်း။ အများစုကရိုးရာကစိန်ခေါ်မှုရှာပါ။ သို့သော်ကြိုတင်သတိပေးမှုမရှိ, forearmed ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအ reboot ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့သူတို့ရဲ့လမ်းမပေါ်တွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုသိမှတ်ကြလော့တို့သည်ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။
ခုတ်လှဲခြင်း (ထိခိုက်မှုလျှော့ချခြင်း) သည်အများအားဖြင့်မလုပ်မနေရပြုမူသောအပြုအမူများ၌အကျိုးမရှိပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်ရန်နည်းလမ်းရှာခြင်းသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဖိစီးမှုခံရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် '' NOW A တစ်ခုခုလုပ်! '' ရယူလိုက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှလွယ်လွယ်ကူကူခံစားရသည့်ဓာတုပစ္စည်းများရရှိခြင်းသည်အလွန်အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချရုံမျှဖြင့်လူအများစုအတွက်မလုံလောက်ပါ၊ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးသောလမ်းကြောင်းများသည်အလွယ်တကူပြန်လည်အုပ်စိုးနိုင်သည်။ အချို့ခေါင်းမာသောဖြစ်ရပ်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပင်ကြာမြင့်ပြီးပိုမိုကျန်းမာသောလမ်းကြောင်းသစ်များပေါ်ပေါက်လာရန်နှင့်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန်မလိုတော့ပေ။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရေရှည်စောင့်ကြည့်ခြင်းမှမိမိကိုယ်ကိုအာရုံလွဲသွားစေသည့်အလေ့အထကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီတော့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပါ -
12 ခြေလှမ်း, SMART ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်များအားလုံးအကူအညီနဲ့လုပ်နိုင်
ဘယ်လိုလေ့လာပါ ဆုလာဘ်စနစ်က ဦးနှောက်အကျင့်ကိုကျင့်၏။ ဒီမလှူမယ့် dysregulated ဦးနှောက်အခွအေနေကြောင်းနားလည်ခြင်း abstinence ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ကူညီပေးသည်
အဆင့်2- စိတ်ကိုယဉ်
အများစုမှာရှောင်ကြဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအချို့မျိုးမှအကျိုး။ ဒါကမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှသို့မဟုတ်ကုသအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပညာရှင်များထံမှလာနိုင်ပါတယ်။ ပွေ့ဖက်၏ပုံစံအတွက်မေတ္တာ, cuddles, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု, ယုံကြည်မှုနှင့် Bond အားလုံးဦးနှောက်ထဲမှာ neurochemical oxytocin ၏အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ oxytocin လျှပ်စစ်နှင့် neurochemicals ၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိကူညီပေးဖို့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး:
cortisol (စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း) နှင့် dopamine (မတရားသော) Counteracts
စိုးရိမ်စိတ်, ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်၏ခံစားချက်များကို Soothes
နေ့စဉ်ဘဝ၏ဖိစီးမှုများနှင့်မျိုးကွဲများကိုခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာပုံမှန်၊ နက်ရှိုင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေ့လူကြိုက်များတဲ့ version တစ်ခုကတော့ Mindfulness လို့ခေါ်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေသည့် (သို့) စဉ်းစားနေသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအကဲဖြတ်ခြင်းမဟုတ်သောနည်းဖြင့်သတိရှိရှိအာရုံစိုက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုအတွေးများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရန်အချိန်မပေးဘဲလုပ်မည့်အစားသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။ လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ဖြေရှင်းခြင်းများသို့မဟုတ်အားကြီးသောနည်းဖြင့်ပင်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
ထောက်ခံနည်းစနစ်တစ်ခုထိရောက်သောပေါင်းစပ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အများစုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ oxytocin အဆင့်ဆင့်တင်ပြထားတယ်။
သတိသည် Cognitive Behavioral Therapy (CBT) နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ CBT သည်သတိနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောနေရာတွင်အတွေးနှင့်အမြင်များ၏အပျက်သဘောဆောင်သောအလေ့အထများကိုပြောင်းလဲရန်ပြုလုပ်သောနေရာတွင်သတိရှိသောတရားအားထုတ်ခြင်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော၊
စိတ်ခွန်အားနိုးအင်တာဗျူး (MI) ကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ခြင်းဖြင့် abstinent ဖြစ်လာမှဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုထောကျပံ့ဖို့အတွက်ကူညီရာတွင်အသုံးဝင်သက်သေပြခဲ့သည်။
MRI Scan ဖတ် amygdala (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း) တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (အာရုံကြောဆဲလ်) လျော့နည်းသွားပြသ
မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူမှု - hippocampus အတွက်တိုးမြှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပါ အခမဲ့နက်ရှိုင်းသောအပန်းဖြေလေ့ကျင့်ခန်း သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်အနားယူနှင့် rewire ကူညီဖို့ရန်။ စိတ်ဖိစီးမှု neurochemicals များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခွင့်ပြုပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေအသိအမြင်နှင့်အသစ်အတွေးအခေါ်များများအတွက်စွမ်းအင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒီတတိယတဦးတည်းအတွက်စိတ်ကူးသင်ရထားသို့မဟုတ်သည့်အခါအခြားသူများကိုလှည့်ပတ်နေကြသည်အပေါ်လုပ်နိုင်အောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများဖေါ်ပြခြင်းမရှိဘဲစိတ်ကိုအပန်းဖြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 18.13 မိနစ်ကြာရှည်ခံသည်။
အဆင့်3- အဓိကဘဝကျွမ်းကျင်မှုများကိုလေ့လာပါ
အချို့လူများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သို့မဟုတ်မွေးကင်းစအားနည်းချက်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းအားပြောင်းလဲသွားသောမျိုးရိုးဗီဇအခြေအနေမပါဘဲတစ်စုံတစ် ဦး ကဲ့သို့မောင်းနှင်မှုနှင့်အပျော်အပါးကိုတူညီစွာရရှိရန် 'go go it it' neurochemical, dopamine ပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ သူများသည်ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာအခြားသူများထက်စွဲလမ်းမှုကို ပို၍ ခံကြရသည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့သည်အဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်လူတို့အပြုအမူသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုထဲသို့ကျသည်။
ပထမ ဦး စွာသူတို့သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စတင်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ရံဖန်ရံခါအားရစရာများသည်ပုံမှန်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ရလဒ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အရက်နာကျခြင်း၊ ချိန်းဆိုမှုများလွဲချော်ခြင်း၊ ကတိက ၀ တ်များပျက်ပြားခြင်းများရှိသော်ငြားကျွန်ုပ်တို့အားပျော်ရွှင်စရာဟူသောကတိသို့အလွယ်တကူသွေးဆောင်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူမှုရေးဖိအားများနှင့်ကြော်ငြာခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုလာဘ်စနစ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်အပျော်အပါးများကိုလိုက်စားစေနိုင်သည်။ FOMO သို့မဟုတ် 'ပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုကြောက်ခြင်း' ဆိုတာငါတို့သတိထားရမယ့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဂိမ်းတစ်ခုပဲ။ Social media သည် ဦး နှောက်တီကောင်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည်။
စွဲလမ်းနိုင်သည့်ဒုတိယနည်းမှာနေ့စဉ်အသက်တာ၌နာကျင်သောအခြေအနေသို့မဟုတ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုရှောင်ရှားရန်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအလိုဆန္ဒမှဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်အခြေအနေအသစ်များ၊ လူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ပconflictိပက္ခနှင့်မိသားစုရန်ငြိုးစသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဘဝစွမ်းရည်ကိုတစ်ခါမျှမလေ့လာဖူးသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အပျော်သဘောရှာခြင်းသည်အစပိုင်းတွင်ဖိအားကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်မူလပြproblemနာ၏ထက်ဖိအားပိုကြီးလာနိုင်သည်။ စွဲလမ်းမှုသည်လူတစ် ဦး အားမိမိ၏လိုအပ်ချက်များကိုလုံးလုံးလျားလျားအာရုံစူးစိုက်စေပြီးအခြားသူများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမရရှိနိုင်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုများလာပြီးဘဝကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။ လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ အစာစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုကြော်ငြာသူများသည်ပျော်စရာရှာရန်နှင့်အားထုတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောနာကျင်မှုသို့မဟုတ်အခြေအနေများကိုလျစ်လျူရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုလုယူကြသည်။
key ကိုဘဝကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်းဒီကိုပြောင်းကူညီခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများနှင့်စွဲလမ်းသို့ကျသွား၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။ ရုံစွဲလမ်းအပြုအမူကိုဖယ်ရှားမကြာခဏအလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအဖြေသည်ထိုတွင်ရှိနေတုန်းပင်ဖြစ်ပြီးလူကိုထိခိုက်လွယ်ပြီးဝေဖန်မှုများနှင့်ပconflictိပက္ခများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ အရက်သေစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွန့်လွှတ်ပြီးသဘောမတူညီသည့်ပထမအကြိမ်ပြိုကွဲပြီးနောက်အလုပ်တစ်ခုရှာရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြသူများ၏ပုံပြင်များများစွာရှိပြီး၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်သောအခါခက်ခဲသောအခြေအနေများကိုရင်ဆိုင်ရန်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိအသစ်များကိုရှာသောလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမတို့တွင်လည်းကောင်းသောပုံပြင်များရှိသည်။ တချို့က "စူပါပါဝါ" ဖွံ့ဖြိုးဆဲအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင်နေထိုင်သူများသည်သူတို့၏ဘဝကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်ဘဝစွမ်းရည်များတိုးတက်သောအခါပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အရှက်ရခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းသို့မဟုတ်အထီးကျန်ခြင်းခံစားခြင်းများကိုဆိုလိုသည်။
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လူကြီးများ, 8 နာရီ9နာရီညဥ့်အလုံအလောက်ပွနျလညျထူထောငျအိပျပျြောရယူခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပန်းဖြေခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ - ဥပမာ၊
ယောဂ, Tai Chi ပိလတ်မင်း
လေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းမရှိသောစိတ်သည်ဘာမျှမအောင်မြင်ပါ။ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ယူခြင်းသည်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ အချိန်ယူရမည်။ ဆန့်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာကိုဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ဘူး။ ဘယ်သူမှသင်ယူနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်မှုများလေလေပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေများတွင်ရှင်သန်နိုင်လေဖြစ်သည်။ ဤကျွမ်းကျင်မှုများသည်ဖရိုဖရဲနေထိုင်မှု၏ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်
အိမ်တွင်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု - သန့်ရှင်းရေးနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုစနစ်တကျထားရှိခြင်း
ဘဏ္capာရေးစွမ်းရည် - ဘတ်ဂျက်ကိုသင်ယူခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်သိမ်းဆည်းခြင်း
, ရန်လိုရန်လို passive သို့မဟုတ် passive ဆန့်ကျင်အဖြစ်တဲ့အခါမှာသင့်လျော်တဲ့ဆိုထားပါသည်ဖြစ်သင်ယူခြင်း
ဖန်တီးမှုဖြစ်ခြင်း, မနာသီချင်းဆိုတတ်ဖို့သင်ယူအတွင်းစိတ် emotion- ဖော်ပြကခုန်တစ်ခုတူရိယာ play, ဆွဲ, ဆေးသုတ်, ပုံပြင်များရေးသားဖို့
, ပျော်စရာရှိခြင်းဂိမ်းကစားခြင်း, ရယ်မော, ပြက်လုံးကိုပြောပြ
ဤဝဘ်စာမျက်နှာကိုသာအဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 3-Step ပြန်လည်နာလန်ထူမော်ဒယ်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအောပေးထားတယျ။ ကျနော်တို့လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း၎င်းဒြပ်စင်၏အသီးအသီးကိုထောကျပံ့ဖို့ပိုပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျောင်း, လူငယ်ကလပ်မှာသို့မဟုတ်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဤဘဝကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အတန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှာသူတို့ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။
၁ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသုံးပါနှင့်
2 - စိတ်ကိုယဉ်
<< Porn အခမဲ့ Going TRF အဆင့်သုံးဆင့်ကာကွယ်ခြင်းအစီအစဉ် >>